WARBIXIN: Ninkii daqarrada badnaa, Sheydaan Geesa leh, King Kong & Naynaasyada cajiibka ah ee uu leeyahay Prof. Georgio Chiellini! – Gool FM
(Turin) 29 Luulyo 2021. Warbixintaan waxaan kaga hadli doonnaa waxyaabo cajiib ah oo ku saabsan daafaca magacyada badan ee kooxda Juventus iyo xulka Talyaaniga Georgio Chiellini ama King Kong-ka kubadda Cagta Talyaaniga.
Waa mid ka mid ah daafacyada ugu wanaagsan ee soo maray taariikhda kubadda cagta, kaas oo muddo 20 sanbadood ah ciyaaraha ka dhex muuqda, haddii aad ka mid tahay dadka jecel daawashadiisa mararka qaar waxaad la yaabaysaa sida bahalnimada iyo cabsi la’aanta ah ee uu kubadda u dheelo, haddii aad ka mid tahay dadka necebna dabcan waxaad markaa jebinaysaa xeerarka kubadda cagta oo ninkani waa mid ku guuleystay koobabka kubadda cagta ee suurogalka u ahaa marka laga reebo Champions League.
Waxaa Chiellini lagu tiriyaa mid ka mid ah ciyaartoyda tirada yar ee kubadda cagta ee haysta shahaadada heerka jaamacadeed, waana Macallin ama Ustaad Jaamacadeed oo shahaado dhanka Dhaqaalaha iyo Ganacsiga ka qaatay Jaamacadda magaallada Torino ee Talyaaniga sanadkii 2010-kii, halka sanadkii 2017-kiina uu helay shahaadada kale ee Master-ka, waxaana uu isku dhex waday ilaalinta difaaca kooxda Juventus iyo tacliinta sare.
Chiellini waa nin magacyo badan, waxaana magacyada loogu yeero ka mid ah; King Kong, Sheydaan Geesa leh iyo ninkii daqarrada badnaa iwm, waxaana daafacan uu 5 jeer ka jabay Sanka muddo 10 sano gudaheed ah.
Warbixin dheer oo uu wargeyska ‘Daily Mail’ ee Ingiriiska ka soo baxa uu ka qoray ciyaaryahan Giorgio Chiellini ayaa waxaa lagu falanqeeyay shaqsiyadda daafacan, iyadoo wargeysku uu ku tilmaamay inuu yahay mid naftii hure ah oo aan ka cabsan in uu dhaawac soo gaaro, una ciyaara qaab hore oo qadiimi ah oo isaga u gaar ah, waana nin dhib badan isla markaana caqli badan.
Wargeyska Daily Mail waxa uu Chiellini ku tilmaamay mid sheeko xariiro badan, lehna weji baaba’san oo daqarro badan oo aad u malayso dad qalato caadi ah, waa sheydaan geeso leh oo aan weligii ka cabsan inuu jirkiisa u dhigo khatar kasta, waa mid ku faraxsan inuu isticmaalo gacmihiisa, xusulladiisa iyo wax walba oo uu ku joojin karo ciyaartoyda ka soo horjeedda, laakiin markii aad u sii fiirsato wuxuu leeyahay qalbi wanaagsan.
Chiellini oo ku guuleystay Koobkii Adduunka 2006 iyo Koobkii Qarammada Yurub ee bishan lagu soo geba gebeeyay Ingiriiska ayaa marka aad wejigiisa eegto waxaad u malaynaysaa 50 jir, taasoo ay ugu wacan tahay dhaawacyadii iyo nabarradii soo gaaray intii uu ciyaaraha ku soo jiray, sida ay warbixintu tilmaamayso.
Waxaa jirtay mar haatan ka hor Cheillini la weydiiyay midka wanaagsan labada ciyaaryahan ee Cristiano Ronaldo oo haatan Juventus u ciyaara iyo Lionel Messi oo Barcelona u safta, waxaana Chiellini oo arrintaa uga warramayay Euro Sport uu yiri: “Marka aad calaamadeyneyso oo aad xiranayso Cristiano Ronaldo waxaad mar walba u baahan tahay inaad hor istaagto in kubbaddu ay lugtiisa midig gasho, laakiin marka aad calaamadeyneyso oo aad xiranayso Messi wax kale kuuma furno aan ahayn in aad duceysato.”
Markii Talyaanigu ay ka hareen Koobkii Adduunka 2018-kii lagu qabtay Ruushka waxaa Chiellini uu eedda dusha uga tuuray tababaraha Spanish-ka ah ee Pep Guardiola ee haatan layliya kooxda Manchester City, waxaana isagoo 08 Febraayo 2018-kii la hadlayay Wargeyska ‘La Gazetta dello Sport’ uu yiri “10-kii sano ee ugu dambeysay waxaa tababareyaal badan oo Talyaaniga ku sugan ay isku dayayeen in ay iska doon doonaan qaab ciyaareedka Guardiola, waxaana taasi ay keentay in ay tababarayaashaasi beddelaan qaab ciyaareedkii daafaca ahaa ee lagu yaqaannay Itaaliya, waa tababare weyn, laakiin afkaartiisaas waa midda burburisay kubadda cagta Talyaaniga, sababtoo ah tababareyaal ayaa ku daysanaya”.
Ciyaaryahan Chiellini waxa uu leeyahay walaal ay Mataano yihiin oo lagu Magacaabo Claudio Chiellini, kaas oo ah wakiilka gaarka ah ee Georgio, sidaas oo ay tahayna Claudio waxa uu taageeraa kooxda AC Milan.
Isku soo wada duuboo Georgio Chiellini waxa uu sheegay in uu qabo hal iin, taasoo ah inuusan lahayn San qurux badan, waxaana mar uu ka hadlayay Sankiisa dheer uu yiri: “Waxaan jeclaan lahaa in carruurtaydu ay yeeshaan Sanka xaaskayga Carolina oo kale”.
Intaas waxaan ku soo gabagabaynaynaa sheekooyinkii cajiibka ahaa ee aan kaga hadlaynay daafaca Magacyada badan ee Georgio Chiellini.